उपभोक्ताहरू नयाँ मिडिया ल्याण्डस्केपको बारेमा के सोच्छन्? | Martech Zone
उपभोक्ताहरू नयाँ मिडिया ल्याण्डस्केपको बारेमा के सोच्छन्?
शुक्रबार, जुलाई 3, 2015 Douglas Karr
सोध्नुपर्दा एक चाखलाग्दो क्वान्ड्री छ प्रतिक्रिया एक सर्वेक्षण बनाम वास्तविक संकलनको माध्यमबाट व्यवहार। यदि तपाइँ कुनै उपभोक्तालाई उनीहरूको विज्ञापन मन पराउनुहुन्छ भने सोध्नुहोस्, केही छनौट गर्न को लागी उफ्रिन्छ र कसरी उनीहरू पछाडिको विज्ञापन वा आफ्नो मनपर्ने टेलिभिजन कार्यक्रमको बखत अर्को विज्ञापन पपअप गर्न अर्को विज्ञापन कुर्दैनन् भनेर। मैले वास्तवमा त्यो व्यक्तिलाई कहिल्यै भेट गरेको छैन ...
वास्तविकता, अवश्य पनि, कम्पनीहरूले विज्ञापन गर्दछ किनकि त्यसले काम गर्दछ। यो लगानी हो। कहिलेकाँही लगानी ब्रान्डको सचेतताको लागि दीर्घकालीन हुन्छ र पुग्छ जहाँ लगानीमा प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा हुँदैन। अन्य समय, यो एक कडा अभियान हो ... सायद छुट छ ... जुन तत्काल प्रतिक्रिया ड्राइभ गर्नुपर्छ। जबकि उपभोक्ताहरू भन्छन् कि उनीहरू विज्ञापन मन पराउँदैनन्, र विज्ञापन वेवास्ता गर्न सक्छन्, तिनीहरूले अझै विज्ञापन गर्दछन् जब विज्ञापन उनीहरूको रूचि वा मागहरूसँग सान्दर्भिक हुन्छ।
सर्वेक्षण प्रतिक्रियाको विश्लेषण गर्दा यो केवल सावधानीको एक शब्द हो। एक्वीटी समूहको यो सर्वेक्षणको नतीजाले परम्परागत च्यानलहरूको तुलनामा नयाँ मिडिया च्यानलहरूमा उपभोक्ता प्रतिक्रिया तुलना गर्ने राम्रो काम गर्दछ। उदाहरणका लागि, फेसबुक अखबारको विज्ञापनको अधिकार नजिक छ। जे होस्, टिभी र प्रिन्टको ब्रान्डित सामग्रीका साथ नयाँ ग्राहकहरु लाई ड्राइभ गर्न को लागी बजार को स्वामित्व छ।
मैले सँधै भनेको छु कि उपभोक्ताहरू उनीहरूको अर्को खरीद गर्न फेसबुकमा जान सक्दैनन्, त्यसैले म प्रायोजित सामग्रीहरूको लागि त्यहाँ त्यति कदर नभएकोमा श don't्का छैन - यद्यपि छुट प्रभावकारी हुन सक्छ। अर्को शब्दहरु मा ... उपभोक्ताहरु वास्तव मा तपाइँको ब्रान्ड संग एक व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रवेश को बारे मा परवाह छैन - बस केहि गर्नुहोस् भने उनीहरूलाई एक सम्झौता दिनुहोस्।
एक्सेचर समूह, एक्सेचर इन्टरएक्टिभको हिस्सा, २००० अमेरिकी उपभोक्ताहरू उनीहरूको परिवर्तन वाणिज्य परिदृश्यमा ब्रान्डको संलग्नताको अपेक्षामा सर्वेक्षण गरी। उनीहरूको आदत र प्राथमिकताहरू डिजिटल सment्लग्नता, शपिंग र सेवाहरू आसपासका प्रवृत्तिहरू पत्ता लगाउँदछन् जसले २०१ and मा वा पछाडि ब्रान्डलाई प्रभाव पार्दछ।
अवसरहरू, मेरो विचारमा, तपाईंको ग्राहकहरूको मागको फाइदा उठाउँदैछन् प्रासंगिकता र प्रतिक्रिया। यदि उपभोक्ताहरू देख्दछन् कि कुनै ब्रान्डको साथ संलग्न भएमा उनीहरूले उनीहरूलाई के प्राप्त गर्छन् र जब उनीहरूले यो चाहन्छ, उनीहरू साइन अप हुन्छन्!
पूर्ण रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस् - एक्वीटी ग्रुप, २०१ Commerce वाणिज्य अध्ययनको अर्को जेनेरेसन.
टैग: उपभोक्ता व्यवहारउपभोक्ताको मागउपभोक्ता प्रतिक्रियाग्राहक वफादारीछुटहरूफेसबुकभौगोलिक स्थानवफादारीसहजमोबाइल भुक्तानीमुद्रणसामाजिक प्रवर्धनसामाजिक छुट
चाखलाग्दो: स्थापना, उत्पादन थप्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्।
जुलाई,, २०१ at 8::2015। बिहान
मेरो रायमा छुटले फेसबुक र ट्विटरमा प्रयोगकर्ता आधारमा धेरै असर गर्दैन।
म छुट दिने ठूलो फ्यान होइन, पॉल। मलाई लाग्छ कि तपाईं गलत ग्राहकहरू जहाजमा पाउनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो उत्पादन वा सेवाको अवमूल्यन गर्नुहुन्छ। तर सर्वेक्षणहरू निरन्तर भन्छन् कि व्यक्तिहरूले सोशल मिडियामा ब्रान्डहरू पछ्याउँछन् किनकि उनीहरू सम्झौता, छूट वा कुपनको आशा गर्दैछन्।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 18::2015० अपराह्न
हे डगलस, तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ शीर्ष companies कम्पनीहरूले नयाँ मिडिया ल्यान्स्केपमा प्रभाव पार्दैछन्?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 19::2015० अपराह्न
त्यो एक मनमोहक प्रश्न हो र यससँग बहु आयामहरू छन्। म सँधै "शीर्ष" दाबी गर्न हिचकिचाउँछु किनकि यो व्यवसायको आवश्यकताहरुसंग कसरी प्रासंगिक छ र कसरी उनीहरूले उनीहरूको सम्भाव्यतामा प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गरिरहेका छन्। को लागी नयाँ मिडिया:
मलाई लाग्छ त्यहाँ केहि अद्भुत परिवर्तनहरू भिडियोको साथ आउँदैछन् त्यसैले म खोल्ने थिए Blab। दर्शकको सहभागिताको साथ यो खुला भिडियो कन्फरेन्स गर्ने क्षमता अद्वितीय र धेरै पूरा अनुभव हो।
Snapchat सायद अर्को हुन सक्छ। अद्यावधिकहरूको अस्थायी पक्षको कारण, यो व्यवसाय र मानिसहरू अधिक पारदर्शी हुन गइरहेको छ। तिनीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्।
सिसोमो गाज सामाजिक मिडिया निगरानीमा एक ठूलो प्रगति हो जसले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डलाई भिडियोमा र छविहरूमा प्रदर्शन गरिँदै पाठमा उल्लेख गर्नुको लागि सुन्न अनुमति दिन्छ।
अनुकूलन रूपान्तरण फनेल तल आगंतुकहरु लाई अगाडि बढाउन इष्टतम उपयोगकर्ता अनुभवहरु लाई भविष्यवाणी गर्न र प्रस्तुत गर्न मेशिन लर्निंग प्रयोग गर्ने कम्पनी हो।
एप्पल एक उल्लेख प्राप्त गर्नुपर्दछ ... मात्र किनकि म एक प्रशंसक हो, तर एप्पल वाच भनेको पहनयोग्य टेक्नोलोजीमा उन्नति हो जुन आशाजनक छ।